Firy 4-DHEA no niova fo ho testosterone? | AASraw
/Blog/4-DHEA , Gallery/Firy ny 4-DHEA miverina amin'ny testosterone?
Posted on 06 / 30 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao 4-DHEA, Gallery. Manana izany 0 Comment.
Ny zava-drehetra momba ny 4-DHEA
1. Inona no 4-DHEA
2.How miasa amin'ny 4-DHEA
3.Is 4-DHEA ny Prohormone
4. Inona ny tombony 4-DHEA?
5. Ny 4-DHEA dia ny steroide anabolic
6.Ho ny fampiasana 4-DHEA?
7. Ahoana ny fampidirana ny fiantraikan'ny 4-DHEA
8.How 4-DHEA dia lasa niova fo ho testosterone
9. Inona no fahasamihafana eo amin'ny DHEA sy 4-DHEA?
10.Top 5 Prohormones populaire
11.4-DHEA ho an'ny varotra
I.4-DHEA vovoka ireo karazana fototra:
1. Inona ny 4-DHEA?
4-DHEA vovoka, CAS 571-44-8, fantatra koa amin'ny 4-androstene-3b-ol, 17-iray, 3β-Hydroxy-4-androsten-17-iray, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-one, 3β-hydroxy -D4-androsten-17-iray, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-iray, 3β-hydroxy-etioallocholan-4-en-17-iray. Ny 4-Dehydroepiandrosterone (4-DHEA) dia steroid izay isomeran'ny 5-dehydroepiandrosterone.
Ny poeta 4-DHEA dia ny non-methylated (non-17AA) PRO-steroid voajanahary. Na dia mety hipoitra aza ny 4-DHEA dia mety tsy ampy mba hampisy fiantraikany eo amin'ny ejipsiana avo lenta. Ho tanteraka ny valiny rehetra na ny 4-AD taloha voarara ao amin'ny 2004. Ny dossier avo kokoa amin'ity fitambaran-javatra ity dia hamokatra haingam-pandaminana miadana amin'ny tazomoka, miaraka amin'ny fanatsarana haingana amin'ny tanjaka. Ity vokatra ity dia mety miteraka siramamy avy amin'ny fiovan'ny estrogen, izay mety ho voavaha amin'ny fitantanana tsindrona aromatase, saingy ity dia hamotika tanteraka ny tanjon'ny fampiasana ity fitambarana ity hanombohana.
anarana 4-DHEA, 4-Andro, 4-AD
Color Fotsy fotsy fotsy na fotsy Fotsy
Ora nanomezana ao anatin'ny ora 12 aorian'ny fandoavana
Fomba fandoavam-bola Wu, MG, bt, TT
Package saribakoly vita amin'ny volonkoditra na fanoratana
Description Ny 4-DHEA dia fihetsika tsy voajanahary (tsy-17aa) izay tsy methylated (pro-steroid). Ny 4-DHEA, toy ny DHEA, dia mitaky ny dingan'ny fivoaran'ny 2 amin'ny 3b-HSD sy 17b-HSD mba hamadika azy amin'ny Androstenedione / androstenediol, ary avy eo testosterone. Ny mahatonga ny 4-DHEA hafa kely amin'ny DHEA dia fifandraisana roa eo amin'ny toerana 4th fa tsy ny 5th. Izany dia mahatonga ny 4-DHEA tsy dia matevina loatra raha tsy mihetsika mivantana amin'ny mpikatroka estrogen toy ny nataon'ireo DHEA.
Koa satria ity zava-mitranga ity dia mitranga ary ny tsy methylated amin'ny ankapobeny dia ho malemy. Na izany aza, mety ho an'ny hoditra marefo, akne ny tosidra avo be ary hampiakatra tosidra. Satria ity steroid ity dia tsy 17AA tokony ho kely ny fiahiahiana momba ny fiantraikany ratsy amin'ny HDL / LDL. Satria ity fivontosana ity dia afaka mivadika ho testosterone ka afaka mivadika any amin'ny DHT sy ny metabolita hafa amin'ny 5A. Izany dia mety ho toy ny pikentika tsara amin'ny fiterahana na tsy misy endrogen izay mety miteraka olana amin'ny libido na gyno noho ny tsy fisian'ny hery androgenic.
2. Ahoana ny fiasan'ny 4-DHEA?
Rehefa avy nolevonina ny 4-DHEA (4-Andro) dia miditra ao amin'ny rànao ary miova ho testosterone. Ny fitambaran-javatra dia hanomboka hanana fihetsika anabolika miavaka, ka mitombo ny habetsahana sy ny fitomboan'ny hery rehefa manatsara ny fiarahan'ny lahy sy ny vavy - manome anao izany "Alpha Male Ecstasy" tsy mampino.
3. Ny 4-DHEA (571-44-8) Prohormone?
Inona no atao hoe Prohormone?Prohormones dia vahaolana mahasoa ho an'ny vokatra hormonina fara-tampony. Ny Prohormones dia vovoka izay nalaina am-bava. Ny Prohormone dia midika fa ny fihetsika tafiditra dia dingana ho an'ny hormone. Amin'ny tenany ihany, tsy mahomby izy ireo. Ny asany dia ny mivezivezy amin'ny rà mandriaka. Raha vao niova ho hormon iray ny prohormonina, dia manara-maso ny haavon'ny hormonina. Eritrereto ny prohormone ho proteinina izay miova amin'ny proteinina hanatsarana ny fahombiazan'ny atleta sy ny fahasalaman'ny ratra.
4-DHEA dia ohatry ny prohormone, ary mazava ho azy, 4-DHEA dia tsy prohormon satria mila fifanakalozan-kevitra roa hiverina amin'ny Testosterone. Noho izany, eritrereto ny 4-DHEA ho toy ny "pro-pro-hormone".
4-DHEA (4-Andro), dia prohormone izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo tombony avy amin'ny DHEA raha tsy misy ny fiantraikany ratsy amin'ny fihenan'ny estrogenic. Ny 4-DHEA dia natiora DHEA isomer. Ny DHEA, na dehydroepiandrosterone, dia hormonina novokarin'ny fidiran'ny adrenalinina.
Ny glanda adrenaliny dia onja izay eo an-tampon'ny voa. Izy no mpamokatra ny hormones manan-danja indrindra ao amin'ny vatanao izay manampy amin'ny fitondrana ny hormones momba ny firaisana sy ny kortisol. Mila an'ireto hormones ireto ianao mba ho salama tsara sy ho tafavoaka velona. Ny iray amin'ireo hormones manan-danja vokatry ny trondro adrenal dia adrenalinina. Ny ady ataonao na ny fihetseham-pon'ny sidina mankany amin'ny toe-javatra mampiady saina dia avy amin'ireo hormonina mananontanona ireo amin'ny voa.
Ny hosea DHEA izay novokarin'ny lohalika adrenalina, fa ny atidoha ihany no mahatonga izany. Ny DHEA dia mamela ny famokarana androgenes sy estrogens, izay tombontsoa iray tian'ny ankamaroan'ny olona te hampitombo ny haben'ny ratra sy ny fahasalamana hozatra. Amin'ny maha-vatana azy dia mihena ny famokarana DHEA ao amin'ny vatana. Ny fihenan'ny DHEA ao amin'ny vatana dia mitarika aretina hormona, fihenan'ny fiasan'ny firaisana ary ny osteoporose.
Ny 4-DHEA dia ohatry ny prohormon izay mitaona ny asa atao amin'ny androgenic ary mety hamerina ny dHEA ao amin'ny vatana. Mijanona ho mavitrika izy mandra-pahatongan'ny dingana atao amin'ny fotoana mety.
4. Inona no tombony azon'ny 4-DHEA?
Ankoatry ny, Ny tombony 4-DHEA Manantena ny hahazo ireto valiny ireto:
- Mandreraka ny fihetseham-ponao
-Fomba fanarenana amin'ny fotoana
Amin'ny fotoana mahamety ny sakafo dia ho hitanao fa tafaverina haingana avy amin'ny fiatoana haingana kokoa ianao rehefa vita ny fiatoana.
- Fitadiavana libido
Hahita rangoranga mahery sy orgasms mahery ianao. Ho hitanao koa fa hanana hery bebe kokoa ianao eo am-pandriana.
- Tsy misy methylated, noho izany dia voatsimbina ny atiny
Mazava ho azy fa ny tanjaka roa 4-DHEA (571-44-8) dia manatsara ny tanjaka sy ny fitomboan'ny hozatra. Ireo no tadiavinao mba hamoronana fialantsasatra elit. Ny fahatelo tsara indrindra 4-DHEA ny fanampiana dia hanampy amin'ny famerenana, noho izany dia afaka manao fanatanjana matetika kokoa ianao ary hahazo ny haingana haingana.
5. Ny 4-DHEA Ny Anabolic Steroids?
Ara-teknika, eny. Fa ny fahasamihafana eo amin'ny steroid sy ny 4-andro dia mampihatra azy ara-dalàna any Etazonia. Ny antony dia 4-DHEA, anarana hafa an'ny 4-andro, dia manana fiovaovana izay mahatonga ny vatantsika ho voajanahary.
Ny DHEA dia mitsinjo - manandrana sy manandratra an'ity iray ity - dehydroepiandrosterone, izay iray amin'ireo steroïde be dia be indrindra ao amin'ny vatana.
Amin'ny alàlan'ny dingan'ny fivoarana enzyme, ny fanafody 4-andro dia lasa steroïda nentim-paharazana izay efa nandalo ny aty.
Avy eo dia miditra ao amin'ny rà mandriaka ny testosterone feno taolana, izay ampiasain'ny vatanao tahaka ny testosteron natiora voajanahary. Na izany aza dia tsy manimba ny atiny izany, ka mahatonga azy ho ampy tsara.
6. Ahoana ny fampiasana 4-DHEA?
Ho an'ny mpandidy, tokony hampidirinao 4-DHEA (4-DHEA dosage) ho an'ny 4-6 herinandro, eo amin'ny 300-500 mg isan'andro.
Ho an'ny bodybuilders na mpamolavolan'ny mpampiasa, afaka mandeha mandritra ny herinandro 6-8 ary mandehana amin'ny dosage 300-750 mg 4-DHEA isan'andro.
Tokony arotsaka am-pahamarinana izany, satria 4-andro dia ohatry ny prohormone izay tsy voavadika. Ataovy azo antoka fa mifikitra amin'ny rafitra matanjaka ianao, anisan'izany ny fandaharam-potoana sy ny bisikileta.
Ao anatin'ity fe-potoana ity, tokony manantena ianao fa hahazo ny fihenan'ny 8-10 amin'ny fihenan'ny muscle.
Ny fomba tsara indrindra dia ny manasaraka ny dose isan'andro, ampahany iray amin'ny AM sy ny iray hafa ao amin'ny PM.
Na, ho an'ny vokatra tsara indrindra, raiso ny antsasaky ny ampiana fanampiny iray isan'ora alohan'ny fanatontosanao ary dieny mialoha ny fandriana. Izany dia miantoka ny fitomboan'ny taova, ny fitomboan'ny hery, ary ny fitsaboana.
7. Ahoana ny fampidirana ny voka-dratsin'ny 4-DHEA?
4-DHEA (4-Andro) dia tsy manana voka-tsoa hafa / 4-DHEA. Mety hiaina fiovan'ny estrogen kely ianao, tsiranoka amin'ny hozatra, tosidra ambony, herisetra ary amin'ny tranga sasany gynecomastia (gyno).
8. Firy 4-DHEA no niova fo ho testosterone?
Ity dia fanontaniana mahagaga izay tadiavin'ny rehetra. Saingy indrisy fa ny valiny dia "miankina" izany ary midika izany fa tena miankina amin'ny olona izany. Raha manana haavo aromatasy izy ireo dia mety hahazo estradiol. Raha maro be ny enzymes HSD, dia mety ho voan'ny goat testosterone ianao. Tena miankina amin'ny olona izany, fa ny fanadihadiana sasantsasany dia naneho ny fivoaran'ny 30% miaraka amin'ny prohormones - izay manan-danja.
Koa satria miova ho vondrona maro ao amin'ny vatana, ny fomba tsara indrindra ampiasain'ny 4-DHEA (571-44-8) dia toy ny cofactor kely ao amin'ny tsingerinao. 4-DHEA dia tsy tokony ho ny tena prohormone ao amin'ny paozinao. Io no ampiasaina indrindra miaraka amin'ny prohormones hafa tahaka ny 1-DHEA amin'ny 2: 1 na 3: 1 (miankina amin'ny karazana vatanao - ectomorphs tokony hampiasa 2: 1, raha tokony hampiasa 3: 1) ny endomorphs.
Inona no fahasamihafana eo amin'ny DHEA sy 4-DHEA?
anarana DHEA 4-DHEA
Main Effects -Anti-zatovo (tanora tanora)
-Meloka miaro (anti-catabolika)
-Hery fiarovana Volombolon'ny olona (fitazonana azota)
Description Ny DHEA dia heverina ho "generic" na DHEA mahazatra. Azo antsoina hoe technique 5-DHEA, satria ny fifamatorana roa dia hita ao amin'ny toerana 5th.
Ny DHEA dia nalaza tamin'ny fanitarana ny fiainana nanomboka tamin'ny 1980. Izany dia ampiasaina amin'ny fahafahany manohana ny angovo sy ny fahasalamana ankapobeny amin'ny doka 50-100mg / andro. (1-3) Vao haingana, ny dose ambony amin'ny DHEA dia nampiasaina hanatsarana ny fananganana ny vatana noho ny fiantraikan'ny DHEA marefo sy ny hafanana. (1, 4) Izany no mahatonga ny DHEA safidy tsara hozaraina mandritra ny tsy fahampian-tsakafo, satria i DHEA dia manana fahasalamana tsara fitehirizana. (1, 17)
Ny DHEA dia miova fo amin'ny testosterone amin'ny ampahany amin'ny 1%, na izany aza dia manana fiovàna goavana ho an'ny 5-androstenediol, izay ahazoany ny môtô sy ny anabolika marefo. (5-8) DHEA ny toetran'ny hafanana avy amin'ny fiovam-pon'ny 7-oxo-DHEA. (4)
Noho ny vokatry ny DHEA sy ny androgenic dia mahalana vao mamokatra ny volo na ny akne. Na dia misy vokany mahazatra aza ny DHEA, dia mahalana vao mamokatra gyno na tsimok'aretina mahatsikaiky. (1-3) Misy mpampiasa sedanina maromaro no mitatitra ny ahiahy na ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny DHEA, izay mety hahakasika ny asan'ny neurosteroid ao amin'ny atidoha. (3) Na dia izany aza, dia voalaza ihany koa ny vokatr'izany ho "hery matanjaka" izay matetika no tatitra avy amin'ny DHEA.
Noho ny tombotsoa lehibe marobe ataon'ny DHEA sy ny toetra voajanahary voalanjalanja dia azo ampiasaina mora foana izy io, na mitazona ny fahazoana tombony mandritra ny tsingerim-bolana. Ny 4-DHEA dia natiora DHEA isomer. Ny rafitra dia mitovy amin'ny DHEA mahazatra fa ny fifamatorana roa ao amin'ny toerana 4th dia manova tanteraka ny vokany.
4-DHEA dia mivadika mora foana amin'ny 4-androstenediol, fa tsy 5-androstenediol, mampitombo ny hery anabolika mihoatra ny 2x noho ny DHEA mahazatra. (6-8, 11) 4-DHEA dia antenaina ihany koa fa hanana tahan'ny fivoarana ambony kokoa amin'ny testosterone raha oharina amin'ny DHEA. (6, 7) Ny 4-DHEA koa dia tsy ampy ny kalorie izay mandoro ny fananana thermogenic, noho izany dia manome tahirin-tsakafo ambony ho an'ny fiantraikany be. (4) Mitombo ny herin'ny hery anabolika sy ny fihenanam-po ny fihenan-tsakafo dia hitarika amin'ny fitomboana hita amin'ny tanjaka, ny fitomboan'ny tavy, ary ny fahazoana mavesatra.
Ny 4-DHEA dia hanana fiovan'ny estrogen maivana izay mety ho voalanjalanja amin'ny steroid tsy misy aina toy ny androsterone na 1-DHEA. Ny tombony ankapobeny dia mitovy amin'ny "4-AD" voalohany voarara ao amin'ny Lalàna Steroid Control Control 2004.
Tahaka ny an'ny isomers hafa ao amin'ny DHEA, ny 4-DHEA dia mitranga ary tsy misy poizina. (9) Heverina ho malemy sy vonjimaika ny tsiran-kevitra manimba toy ny hoditra na ny fiterahana. Ny vokatra miavaka indrindra dia ny fanafoanana ny famokarana testosterone voajanahary, izay mahatonga ny PCT ilaina aorian'ny fisian'ny tsingerina. Ny 4-DHEA amin'ny ankapobeny dia mpitsabo mpanamboatra mendri-kaja tsara sy mahomby.
Ny hany fihenan'ny fihenan'ny 4-DHEA dia ny vidiny avo lenta noho ny dose avo izay ilaina mba hahitana ny fiantraikany amin'ny fanorenana hozatra.
Ny 4-DHEA (4-Andro) (fantatra ihany koa amin'ny 4-Androsterone - 3b-hydroxy-androst-4-ene-17-iray) dia avelan'ny 4-Androstenediol sy 1-Androstenedione, izay dingana voalohany amin'ny testosterone. Midika izany fa amin'ny alalan'ny dingana roa dingana ny fivoaran'ny 4-DHEA dia hivadika ho testosterone ao anatin'ny vatana. Tahaka an'i 1-Andro, io prohormone io dia tsy methylated ary noho izany tsy misy poizina amin'ny aty. Na izany aza, aromatizara izy amin'ny estrogen, noho izany dia ilaina ny fampiasana aromatase inhibitor (AI) rehefa mamakivaky ity vondrona ity.
Ny doka tsara amin'ny 4-DHEA dia 300-750mgs isan-andro miankina amin'ny traikefa iainana miaraka amin'ny fanafody fampihetsiketsehana (PED). Raha mikasika ny faharetan'ny fiaramanidina voatondro, ny mpampiasa dia handramany mandritra ny herinandro 6-8. Araka izay voalaza etsy ambony, tokony hampiasa aretin-totozy aromatase ianao hanakanana estrogen mandritra ny tsingerina, ary koa zavatra iray hanohanana ny tsindry ara-drariny amin'ny haavony. Taorian'ny fampiasana 4-Andro dia takiana ny PCT mini-mini. Tokony hahitana ny clomid ao amin'ny 25mg isan'andro, nolvadex amin'ny 20mg isan'andro, ary ny booster testosterone tsara ho an'ny herinandro 4.
Ny 1-Andro (fantatra koa amin'ny Androsterone - 3b-hydroxy-androst-1-ene-17-iray) dia hormone steroindonesa sy stereo androgen ary manodidina ny 1 / 7th ny herin'ny testosterone. Indray mandeha nampidirina tao amin'ny vatana dia niova ho 1-Testosterone. Koa satria tsy miova amin'ny estrogen na ny DHT ity fitambaran-javatra ity, dia tsy misy ny fiantraikany eo amin'ny sehatry ny estrogenika, toy ny gynecomastia na ny fihazonana rano. Ankoatra izany, 1-Andro dia tsy methylated, noho izany dia tokony ho kely na tsy misy poizina amin'ny toaka, ka mahatonga ny atiny hanohana ny fanampiana tsy ilaina. Na izany aza, dia mety ho vokatry ny asan-dra ny asany mba hampisehoana ny lefona enzymes kely.
Ny 5-DHEA (anarana nomena anarana: 5-DHEA - 3b-hydroxy-androst-5-ene-17-iray) dia hormone izay azo avy amin'ny fantsom-borona ao amin'ny vatan'olombelona (indrindra eo akaikin'ny voa, ny fitsapana amin'ny lehilahy). Tahaka ny efa fantatrao, ny DHEA dia natao ho dingana ho an'ny hormones lahy sy vavy vavy (androgens sy estrogens), ary miasa izany amin'ny fiverenana amin'ny Androstenedione, izay novana ho testosterone.
Ary-Andro (fantatra koa amin'ny hoe: 3b-hydroxy-androstane-17-iray) dia voajanahary amin'ny vatan'ny 5a-reductase enzyme. Ity biby ity dia tsy dia mihanaka loatra amin'ny olona sasany, ka ny vokatra voajanahary dia tsy mitovy amin'ny olona. Rehefa nalaina am-bava, dia niova ho dihydrotestosterone (DHT) ny Epi-Andro, izay 5 indraindray toy ny androgenic amin'ny testosterone, ka mahatonga io fitambaran'asa io ho mahomby amin'ny fitomboan'ny volon-kibo, ny hatsiaka, ny hery ary ny herisetra. Raha ny zava-misy, ny mpampiasa sasany dia efa niaina ny fihenan-tsakafo matroka aza rehefa mampiasa io prohormone io. Koa satria io "volo" io (tsy fiovan'ny estrogen), dia matetika no ampiasaina rehefa mikaroka hahazoana hery sy tanjaky ny masony nefa tsy mahatsapa ny fitehirizana rano.
Ity karazana prohormone manokana ity dia miavaka satria mbola tsy eny an-tsena mihitsy aza. Araka ny filazan'ny anarany, 1,4-DHEA (fantatra amin'ny anarana hoe: 1,4-DHEA - 3b-hydroxy-androsta-1,4-diene-17-iray) dia ny dikanteny DHEA an'ny prohormon taloha Boldione izay voarara ao amin'ny 2012. Ny roa amin'ireo tombony voavin'ity vokatra ity dia ny fanentanana sy ny fanamboarana iombonana.
11. 4-DHEA (571-44-8) For Sale
Maro ny olona te hahafantatra momba ny tsingerina tonga lafatra sy ny prohormone tonga lafatra satria misy zavatra diso diso hevitra momba ny fampiasana ny prohormone tsirairay ary ny antony tokony handraisana azy ireo.
Raha te hampitombo ny tanjaka sy ny fahasalaman'ny taolam-paty, ny prohormones 4-DHEA dia fomba iray ahazoana tombony amin'ny fahatsaran'ny tsara sy ny hozatra. Ny 4-DHEA dia ohatry ny prohormonina izay mampiroborobo ny fihazonana, ny hery ary ny habetsahan'ny rà mandriaka mankany amin'ny hozatra. Ny fampidirana 4-DHEA amin'ny programa fanofanana matanjaka sy fanofanana amin'ny vatanao dia manana vokatra mahavariana miaraka amin'ny voka-dratsiny kokoa.
4-DHEA ny antsasaky ny fiainana dia fohy, mety haka azy io amin'ny ankapobeny na ny anabolika voajanahary tsy misy ahiahy momba ny vokatra hafa tsy voatery, fa ny tsara indrindra amin'ny 1-Andro sy Epi-Andro (varo-boba) satria ireo asa tsara dia tsara amin'ny fihenam-bidy na ny fisorohana fanampiny fitazonana rano.
Tsy sarotra ny mahita 4-DHEA mividy amin'ny aterineto, AASraw (www.aasraw.com) manome vokatra fanangonam-bokatra avy any ivelany, hatsaran-toetra, vidin'ny fifaninanana, fiarovana amin'ny serivisy ary haingana.
Tags: 4-DHEA vovoka, Buy 4-DHEA powder
Desogestrel Pulver For Sale: Reviews & Dosage & Effects Ny fampidiran-danja indrindra amin'ny vovoka azetrol Megetrol